Madaxweeyne Muuse Biixi "Beesha Caalamka Ha Joojiyan Deeqaha ay inoo soo marsiinayan Somaliya" -
HomeWararkaMadaxweeyne Muuse Biixi “Beesha Caalamka Ha Joojiyan Deeqaha ay inoo soo marsiinayan Somaliya”
Madaxweeyne Muuse Biixi “Beesha Caalamka Ha Joojiyan Deeqaha ay inoo soo marsiinayan Somaliya”
Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo jeediyay khudbad uu ugu talagalay munaasabadda 18-ka May oo Maamulkaas u dabaaldega markii ay sheegeen in ay ka go’een soomaaliya inkasta oo aysan aqoonsi helin.
Khudbadiisa waxa uu kaga hadlay arrimo dhowr ah, waxaana kamid ahaa kaalmada Beesha Caalamka ee loosoo mariyo Dowladda Federaalka, waxaana uu si cad u sheegay in aysan aqbali doonin kaalmadaas.
“Beesha Caalamka waxa aan leenahay, 30-sano ayaan kala maqan nahay Soomaaliya, ma qaadan doonno kaalmo naloo soo mariyay Muqdisho ama Soomaaliya, waana in ay taageeraan go’aanka Shacabka ay qaateen” ayuu yiri Muuse Biixi.
Waxa uu sheegay in aysan qaadan doonin deeq waliba oo loosoo mariyo Dowladda Soomaaliya, maadaama uu ku tilmaamay arrin meel ka dhac ku ah hadafkooda sida uu hadalka u dhigay.
“Si looga fogaado colaad iyo dhibaato kale waa in aysan ka shaqeyn Beesha Caalamka, inta ay leeyihiin Gobolada Waqooyi heshiin meyno, Kaalmadaha Somaliland waa in aan lagu xirin heshiiska Xamar, wixii khilaafaad ah caqliga wanaagsan waa in lagu xaliyo wada hadal balse aan lagu galin Soomaali is dagaashan, maadaama aynu kala go’nay” Muuse Biixi Cabdi.
Muddo dheer kadib, horaantii bishii Febaraayo sanadkaan 2020 waxaa markii ugu horeysay kulmay Madaxweynaha DFS Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi.
Kulanka waxaa Gar-wadeyn ka ahaa Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed, waxaana Madaxweyne Biixi uu Xisbiyada Mucaaradka ku ah Maamulkaasi kala kulmay dhaliil ka dhan ah kulankaas.
Wada hadalkaas ayaa dhacay, iyada oo dhowr sano aysan is arkin Madaxda labada dhinac oo wixii ka horeeyay 2017-kii dhowr jeer ku kulmay dalka Turkiga, Madaxweyne Farmaajo waxa uu magacaabay Guddiga wada hadalka labada dhinac.